Ogaden News Agency (ONA) – Machadkii Ugu horeyay ee JWXO ka furto Ogadeniya Xagee laga Furay? Yaase furey? Wareysi Rugcada Macalin Axmed Raage
Machadkii Ugu horeyay ee JWXO ka furto Ogadeniya Xagee laga Furay? Yaase furey? Wareysi Rugcada Macalin Axmed Raage
Wariyaha wakaalada wararka Ogadenya ee xerada qaxootiga Ifo Farxaan Maxamed ayaa xeradaasi kula kulmay rugcadaa caan ah oo in badan ku soo jiray welina ku jira halganka Ogadenya. Rugcadaagan oo aan magaciisa soo wadno ayaa kamid ahaa xubnihii ugu horeeyey ee JWXO xiligii kala guurka ee 1991 kii. Wuxuu sidoo kale rugcadaagan macalin tababare ah kasoo noqday machadkii ugu horeeyey ee ay JWXO ka furtay Ogadenya siiba ceelka Garigoan. Waxaana machadkaas wax ka bartay kana aflaxay xubno badan oo kamid noqday kaadirkii JWXO ee xiligaas.
Hadaba wakaalada wararka Ogadenya(ONA) oo rugcadaa Macalin Ahmed Raage la yeelatay waraysi qiimo badan oo ku qotoma xirfadiisii macalinimo ee dugsigaas iyo weliba taariikho badan oo uu goob joog u ahaa ayaan halkan idiinku soo gudbinaynaa saad uga faaiidaystaan, oo xasuus qorkiinana aad ugu darsataan;
ONA– Rugcadaa Macalin Ahmed kusoo dhawoow Wakaalada Wararka Ogadenya(ONA).
Ahmed-Waad mahadsan tihiin Farxaan adiga iyo Wakaaladaba.
ONA– Macalin machadkii tababarka ugu horeeyey ee JWXO ay furtay xagee laga furay?
Ahmed– Waxaa laga machadka magaalada Garigoan. Waxaana la odhan jiray Machadka Kaafi
ONA-Macalin maxaa loo furay Machadkaas Kaafi?
Ahmed– Waxaa machadkaas loo furay inuu soo saaro howl-wadeeno u tababaran oo loo carbiyo meelmarinta barnaamijka siyaasadeed ee JWXO, kicinta iyo abaabulka shacabka iyo fashilinta shirqoolada cadowga, wuxuuna machadkaasi noqday mid lagu guulaystay dantii lagalahaana lagu gaadhay.
ONA-Macalin yaa furay machadkaas?
Ahmed-Waxaa furay machadka Kaafi maamulihii machadka ee xiligaas hadana ah xog-hayaha arimaha dibada ee jwxo mudaneCabdiraxmaan Sh.Mahdi (Maadeey).
ONA-Macalin adigu maxaad ka ahayd machadkaas markii la furay?.
Ahmed– Waxaan machadka ka ahaa Tababare ama Macalin waxbara ardadii machadkaas.
ONA-Imisa dufcadood(Horimood) ayaa ka baxday machadkaas Kaafi?
Ahmed-Waxaa ka qalin jabisay 3 dufcadood(Horimood).
ONA-Macalin Maxay qabteen ardadii kasoo baxday machadkaas aad macalinka ka ahayd
Ahmed-Masoo koobi karo waxqabadkii ardadii iyo howl-wadeenadii machadkaas Kaafi, si fiican ayay isula cag heleen markiiba waxayna si xowli leh ku dhaqaajiyeen halgankii, waxay bilaabeen soo saarista A-wargaysyo ku hadla codka jwxo heer gobol iyo codka ururka dhalinta kuwaas oo qayb weyn ka qaatay wacyi galinta shacabka Ogadenya soona xarayn jiray dhaqaale xoog leh. B-Kooxo faneed suugaantooda ku cabbira doonista shacabka iyo qadiyada Ogadenya. C-Kulan xaafadeedyo aan kala go’ lahayn, kuwaasoo iyana kaalin muhiim ka cayaarayay abaabulka shacabka, waxayna kooxahaasi wada noqdeen kuwo si dhibyar isula jaanqaada ugana tarjuma rabitaanka shacabka Ogadenya, waxayna ku guulaysteen inay shacabka gaadhsiiyaan risaaladii halgan ee JWXO hurmuudka ka ahayd.
ONA-Macalin waan garanay machadkaas Kaafi ee waxaad nooga warantaa shirkii Garigoan goormaa la qabtay maxaase loo qabtay shirkaas?
Ahmed-Shirkii Garigoan goobjoog ayaan ahaa waxaana la qabtay bishii June 1991 kii, waxaana loo qabtay in JWXO shacbigeeda kala tashato ka qaybgalkii Jaartarka iyo in kale.
ONA-Shirkii xigay ee ahaa shirweynihii O.N.C (Ogaden National Congras) goormaa isaga la qabtay?
Ahmed-Shirweynahaas O.N.C waxaa la qabtay intii u dhaxaysay 8-12 bishii 2aad ee 1992 waxaana dib loogu dhisay dastuurka iyo xeerka JWXO.
ONA-Macalin sidee shirweynahaas shacbigu uga soo qayb galeen?
Ahmed– Sida runta ah shirkaas waxaa looga soo qayb galay si aad ah waxaana furay Alle ha u naxariistee Garaad Makhtal Daahir.
ONA-Aad ayaad ugu mahadsan tahay Macalin Ahmed Raage warbixintan taariikhiga ah ee aad nasiisay.
Ahmed-Idinkaa mudan halgamayaal.